ရွှေတိဂုံနှင့် မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း Shwedagon Pagoda | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ရွှေတိဂုံနှင့် မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း Shwedagon Pagoda
ရွှေတိဂုံနှင့် မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း Shwedagon Pagoda
Posted by Ma Ma on Feb 19, 2015 in Buddhism, My Dear Diary | 17 comments
ရေးမိရေးရာ လက်စမ်းစာပေ ရွှေတိဂုံနှင့် မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း
ဒီနေ့အလုပ်ပိတ်တာနဲ့ မသွားဖြစ်တာ ကြာနေတဲ့ ရွှေတိဂုံကိုသွားခဲ့တယ်။
မီးခိုးမထွက်တဲ့စက်ရုံလို့ဆိုကြတဲ့ တိုးရစ်ဇင် လုပ်ငန်း ထွန်းကားလာတာ ၀မ်းသာမိပါတယ်။
အောင်မြေရှိရာ ရာဟုထောင့်နားရောက်တော့ ယိုးဒယားဧည့်သည်တသိုက် ဘုရားကို စားဖွယ်သောက်ဖွယ်တွေ ပြင်ဆင်ပြီး ကပ်လှူ နေတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။
အဖြူရောင်တွေဝတ်ထားတာဟာသူတို့ရိုးရာအရ ဘာသာရေးအတွက် အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့အနေနဲ့လို့ ထင်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ ပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်း ဘုရားကို အဓိဌာန်နဲ့ လက်ယာရစ် (ဘယ်နှစ်ပတ်မှန်းမသိ) လှည့်လည်ပူဇော်နေတာကို တွေ့လိုက်ရသေးတယ်။
သူတို့ရိုးရာ ပြင်ဆင်လာတဲ့ပန်းကလေးတွေကလည်း ထူးခြားဆန်းပြားပြီး လှပလို့နေပါတယ်။
ဘေးနားမှာ ကတ္ထူစက္ကူ ပုံးတွေ တွေ့ရလို့ အစားအစာတွေကအစ သူတို့ဆီက ယူဆောင်လာပုံရပါတယ်။
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့မှာ တိုက်ဆိုင်ပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားကို အသားငါးတွေနဲ့အတူ ထူးထူးခြားခြားထွတ်ထွတ်မြတ်မြတ် လာရောက်ပူဇော်ကြတာပါ။
သစ်သီးတွေ စားဖွယ်ရာချိုချဉ်ရသာ စုံလင်စွာကပ်လှူ ကြတဲ့အပြင် သားငါးတွေပါ ကပ်လှူ တာက မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးစံနဲ့ ကွဲပြားခြားနားလို့ အမြင်ဆန်းပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသူတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။
မြန်မာပြည်ကို အလည်လာကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားခရီးသည်တွေအနေနဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားကို သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့က နံပါတ်၁ အနေနဲ့ အလေးထားကြပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေရဲ့ အလေးထားမှုကတော့ အတော့်ကို ထူးခြားထွတ်မြတ်နေလို့…….
သူတို့ရဲ့ အထွတ်အမြတ်ထားမှုကို တွေ့မြင်ရပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့
ကျွန်မ မှာ အသိ ယိုးဒယား တွေ အများကြီးဘဲ။
ကျွန်မ ကိုယ်ပိုင်အမြင် နဲ့ ဝေဖန်ရရင် သူတို့ က ကျွန်မတို့ မြန်မာတွေ ထက် အများကြီး ပိုပြီး ဘာသာရေးမှာ superstitious ဖြစ်တယ်။
နောက်ပြီး သူတို့မှာ အခု ထက်ထိ အဆင့်ခွဲတုန်း။
ယူကေမှာတောင် တစ်ချို့ ယိုးဒယား ဘုန်းကြီးကျောင်း တွေ က လက်လုပ်လက်စား (ယိုးဒယား ချင်းနော်) တွေ ကို လက်မခံဘူး။
လှူရင်လဲ လက်မခံဘူး တဲ့။
တကယ်တော့ မြန်မာပြည် မှာ ဘာမှ ဇာတ်နိမ့် ဇာတ်မြင့် မခွဲဘူး။
အစိုးရ အသုံးမကျ လို့ သာ တိုင်းရင်းသား တွေ စိတ်ဓာတ် ကွဲ နေတာ။
အများစု မှာ ဘယ်သူ့ ဘယ်သူ မှ လူမျိုးကြီး စိတ်တွေ။ လူမျိုးသေး စိတ်တွေ မထားဘူး။
အဲဒါ ကို မီးလောင်ရာ လေပင့် နေကြတာ။
တကယ်တော့ အာဏာရှင်အောက်မှာ ကျွန်ဖြစ်နေကြတာ အားလုံး ပါဘဲ ဆိုတာ သိကြဖို့ကောင်းတယ်။
ထုံးစံ အတိုင်း တစ်လွဲ ဖြစ်ပြီ။ ဟိ။
ကိုယ်တွေ ရန်ကုန်ရောက်ပြီး ရွှေတိဂုံမရောက်တာ (တိတိကျကျပြောရရင် ဘုရားမရောက်တာ) သုံးခေါက်ရှိပေါ့
အံ့ပါ့ ငါဆို ရွှေတိဂုံဖူးချင်လို့ကို ဟိုရက်က သွားဖူးတာ မနက်ရော ညရော ၂ ခေါက်တန်အောင် ဖူးပစ်ခဲ့တာ
ကျန်တဲ့နေရာတွေက အချိန်ရလို့ ပတ်တာ
မမရေ ရွှေတိဂုံက အနော့်စိတ်ထဲမလဲ အထွဋ်အမြတ်ဖြစ်တဲ့ စိတ်ရှိတယ်
ဒါကြောင့် မဖူးတာကြာလို့ တကူးတကကို သွားဖူးတယ်
တကယ်တော့ ပူတာအိုဖက်ရောက်တော့ အထက်မှာ ကောင်းမှုလုံ အလယ်မှာ ရွှေစည်းခုံ(ပုဂံ) အောက်မှာ ရွှေတိဂုံဆိုပြီး တနှစ်ထဲ ၃ ဆူ ဖူးရတယ် ဘာညာကွိကွဆိုပြီး ရှိတယ်
အဟိ… ယိုးဒယားတိုင်းပြောတာ ရွှေတိဂုံကရွှေတွေက သူတို့ဟာတွေ… တဲ့
စစ်နိုင်သော ဗမာမင်းများက ယိုးဒယားက သိမ်းလာတဲ့ရွှေတွေကို ဘုရားလှုတာတဲ့…
အဲသာနဲ့… ဟို ရွှေဂျီးကို မင်းတို့ပိုင်ရင် ပြန်ယူပါဆိုတော့ … ဟားကြတယ်…
တကယ်တော့ မြန်မာတွေကို “ဖမ” လို့ သူတို့နှိမ်ခေါ်တာ မကြိုက်ကြသလို…
သူတို့ကို ယိုးဒယားခေါ်ရင် မျက်နှာပျက်ကြတယ်…
ယိုးဒယား = အယုဒ္ဓယ က ဆင်းသက်လာတာမို့လို့တဲ့…
အဖြူဝတ်တာက ဘိက္ခူနီသာသနာ မရှိတော့ဘူးလို့ သူတို့လက်ခံထားလို့ပါ…
တရုတ် ဗုဒ္ဓဘာသာများနဲ့ မယ်သီလရင်များက အဖြူရောင်ပဲ ဝတ်ပါတယ်…
အ ယုဒ္ဓယ = လုပ်ကြံ၍.. စစ်တိုက်၍ မရနိုင်သော လို့အဓိပ္ပါယ်ရသတဲ့..။
မြန်မာတွေက.. အ ဖြုတ်ပြီး.. ယုဒ္ဓယလုပ်.. လုပ်ကြံ(စစ်တိုက်)၍ ရသောမြို့ လို့… ပြင်ခေါ်တာ… တဲ့..။
ဟိုးအပေါ်ကကော်မန့်အရ.. အရီးလတ်တောင်တော်တော် တိုးတက်လာပြီ…
နိုင်ငံတွေကျရှုံး..။ အောင်မြင်ရဲ့ “လက်သည်စစ်စစ်”ဟာ.. ဘာသာရေးလို့.. မြင်လာတဲ့သဘောမှာရှိတယ်…။
ထိုင်းနိုင်ငံဟာ.. Siam, Siamese ဟာ..
ထေရာဝါဒတို့ရဲ့.. နိုင်ငံတခုပါ.. တခုပါ..။
OMB အိုး မိုင် ဗုဒ္ဓ
သများ ဘာများ ပြောလိုက်ပါလိမ့်။
“ဘုန်းကြီးကျောင်း” ဆိုတာ နဲ့ သူကြီးမင်း ရောဂါထ ရောဘဲ။ lol:-)))
အန်တီမမရဲ့ရွှေတိဂုံကိုပီတိအပြီး အရီးရဲ့ ဘာသာရေးထဲဝင်ပြောချင်လို့
မြန်မာတွေက ကိုယ့်ဘာသာဝင်ဆိုပြီးရော ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကလည်း ယုတ်ယုတ်လတ်လတ်မခွဲတတ်ကြဘူးမှန်ပေမယ့်။
အခုဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ဟောတဲ့တရားတွေကအစ ကိုယ်ထိလက်ရောက်ဆက်ဆံပုံအဆုံး ဘာသာခြားပုတ်ခတ်ချက်က ကလေးတွေဆော့ရင်းမတည့်သလိုကိုဖြစ်နေတယ်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို မရောက်ဖြစ်တာကြာပြီ ဒါပေမယ့် မျက်နှာချင်းဆိုင်လမ်းဟိုဘက်တင် ဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုတော့ ဘာသာခွဲ သီချင်း၊ဘာသာခွဲတရား။လူ့အခွင့်အရေးအော်နေတဲ့လူတွေဟာ သူများဘာသာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတာကို လိုက်နှောက်ယှက်နေတဲ့ သစ္စာဖောက်တွေလို့မှတ်ထားလိုက်ကြပါဒကာ ဒကာမတို့ ဆိုတဲ့တရား အိမ်ကလှမ်းနာရ
ဟိုနေ့က ဖဘ မှာပြောခဲ့သလို ကန်ကြီးကရေ ဆင်းခပ်မရတော့အောင်နက်လာချိန်မို့ ရေခပ်သူတွေ ရေလှည်းတွန်းသူတွေဟာ ကန်ပတ်လည် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ထုတ်ပေးထားတဲ့ ရေပိုက်တွေက ခပ်ကြရပေမယ့်။စောက်ကုလားတွေတစ်ယောက်မှလာမခပ်နဲ့ ပြန်သွန်ခဲ့တို့၊ကုလားနဲ့ချိန်းတွေ့တာဘုန်းကြီးမိလို့ နှစ်ယောက်လုံးပါးနားတွေအချခံရတို့တွေ ကြားကြားနေရတာတော့ သူကြီးပြောတဲ့ဟာကိုနည်းနည်း ထောက်ခံမိသလိုပဲ။
တချို့တရားတွေကို ဘာသာခြားတွေ ရှေ့မှာတောင် မနာရဲဘူး။
ထိုင်းခရီးသွားတွေကို မြင်တာနဲ့ပဲ… မနက်က ဖတ်မိတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ် သွားသတိရတယ်ဗျ ။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းက အိမ်ထောင်စုတွေမှာ အကြွေးထူမှု ပြဿ နာ တစတစ ပိုပြီး ကြီးထွားလာနေကြောင်း…ဆိုတာလေး…
နောက်ပြီး ဟိုနေ့က ဖေ့ဘုတ်မှာ တွေ့လိုက်တာလေ…
ထိုင်းမှာ အမျိုးသားသုံးယောက် လက်ထပ်ကြတယ်ဆိုတာ…
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က … ဂေး ဖြစ်နေတာ…
သူ့အကောင့်ကို ကျနော့်ကို ပြတယ်…
.ဂေးဆိုတော့…ဂေးတွေအများစု စုနေတဲ့ အကောင့်ပေါ့လေ…
ပိုစ့်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်တာတွေ ဝင်ပြောသွားတဲ့…
.အောင်ရဲလင်းထက်တောင် အောင်ရဲလင်းနဲ့ ပိူတူသူ….
.ထိုင်းတွေအတွက် ရွှေတိဂုံ ဘုရားဖူးရတာတော်တော်ကြည်နူးစရာကောင်းပုံရတယ်
.အင်း..မမ ကတော့ တစ်သိန်းစီမံချက်စနေပြီ
.အန်တီမမပုံတွေ မြင်တော့မှ ရွှေတိဂုံကိုမရောက်ဖြစ်တာ ကြာပြီလို့ တွေးမိတယ်….။ ကမ္ဘာကပါ တရိုတသေနဲ့ လာလေ့လာရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာ…ဂုဏ်ယူစရာ….
.တကယ့်တကယ် ရွှေတိဂုံဘုရားကို နေရာစုံစုံစေ့စေ့ပတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ တော်တော်အချိန်ပေးရလိမ့်မယ်…။
.ထန်းသုံးပင်သိုက်နန်းတို့လို နေရာမျိုးတွေပါ အပါဆိုရင်လေ….
အပေါ်ဆုံးပုံက နေရာလေးက ထိုင်လို့ကောင်းတယ်….သူတို့က ဘယ်နှစ်ပတ်မှန်းမသိ လက်ယာရစ်ပူဇော်တယ်တဲ့…ကိုယ်တွေတော့ တစ်ပတ်ပြည့်အောင် မနည်းပဲ..နေပူလို့..ရွှေတိဂုံဘုရားဆိုတာမြန်မာတွေအတွက် ဘာနဲ့မှ ယှဉ်မရတဲ့ ဂုဏ်ယူစရာပဲပေါ့….
သများလေ ရွှေတိဂုံကို ညဘက် ပိုင်းသွားချင်တာ ကြာပေါ့။
ဘယ်သူ ဘာပြောပြော ဒီပုံကို အတော် ကြွေနေတာ။
အဲ့ပုံက မိန်းကလေးက မြန်မာ ဟုတ်ဟန်မတူဘူး။
နိုင်ငံခြားသားတွေ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်နေကြတာတော့ တွေ့ခဲ့သေးတယ်။
ထိုင်းတီလုပ်တွေ ဘုရားပေါ်လာပြီး တိရစ္ဆာန်အကောင်လိုက် ပူဇော်တာတော့ အမြင်ရိုင်းသဗျာ။ ကပ်ခြင်ရင် အိမ်မှာပွဲလုပ်ကပ်ပေါ့။။ မြန်တျန့်ရိုးရာ အစဉ်အလာနဲ့ မအပ်စပ်ပါ။ နောင်ဒါမျိုး ထားမြစ်သင့်အိ…။
အင်း ဘုရားကတော့ အရင်က တစ်ပတ်တစ်ခါဆိုသလို အသင်းမှာ တံမြက်စည်းလှည်းတော့ ရောက်ဖြစ်တာ နှစ်ချီနေပါတယ်။ ခုတော့ ကျန်းမာရေးကြောင့် မရောက်ဖြစ်တာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ထဲမှာ တစ်ကြိမ်လောက်ပဲ ရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အရင်လိုပဲ တစ်ပတ်တစ်ခါလောက်တော့ သန့်ရှင်းရေး သွားလုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားဦးမှာပါပဲ။ ညနေပိုင်းချိန်တွေဆို တရားထိုင်လို့ ပိုကောင်းတယ်။ အေးချမ်းတယ်။ စိတ်ကြည်လင်တယ်။